China Indoor intumescent fireproof bemhapemha simbi mamiriro fekitari uye vagadziri | Weicheng
1. Usati washandiswa, mafuta neguruva riri pamusoro pekuputira moto hazvibviswe.
2. Iyo yakasimba yezvinhu zvemoto zvinodzora zvakapetwa zvakakwirira, saka kupfeka kunofanira kumutswa pamberi pekushandisa.
3. Brush, roll uye spray inogona kuiswa, uye jasi rechipiri rinogona kuiswa maawa matanhatu ega ega.
4. Ukobvu hwekupenda hunogona kutsanangurwa zvinoenderana nezvinodiwa nekodhi yemoto, kazhinji 2-6 matanda.
5. Iko kunodzora moto uko kusati kwashandiswa kumusoro kunofanirwa kunamwa zvakare.
Pashure: Mucheka unodzora moto
Zvadaro: Non expansive moto retardant unhani wekunze simbi mamiriro
Non kwakawedzera moto retardant unhani kuti outdoo ...